June 2010 – Everybody Read TChen
ကဲကဲကဲ လာပြီ လာပြီ ဒေါ်သက်ရီနော်
ခေါင်းစဉ်ကိုအရင်ကြည့်ပါ ကျေနပ်မှ ဆက်ဖတ်ပါ ဒါပဲ………………………..
ဒီနေ့ အိပ်ရာထနောက်ကျပါတယ် မနေ့က စောစောအိပ်ရဲ့သားနဲ့တောင် ၁၂ ခွဲလောက်မှ နိူးပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲ လို့ ဇမ်နူးလိုအော်ရမလိုပါပဲ စနေ တနင်္ဂနွေ လုပ်မယ် ကြံထားတဲ့ အလုပ်တွေ တခုမှ မပြီးပါဘူး
ခုတော့ ညလုံးပေါက် လုပ်ရတော့မယ်ပုံပါ မနက်ဖြန်မပြီးလို့ မရပါဘူး မျဉ်းက သောကြာကတည်းက သေနေတာပါ (dead line=line was dead on friday) အဲ့တော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ် ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်း ညလုံးပေါက်အပြီး လုပ်ရပါတော့မယ် အဲ့တာတောင် ခု ၁ နာရီခွဲ ကို အလုပ်မစနိူင်သေးဘဲ လျှာရှည်ပြီး ကြွားချင်နေပါသေးတယ် မကြွားလို့လဲ မဖြစ်ဘူးလေ
ဒီနေ့ အပြစ်တခု ကျူးလွန်ခဲ့တယ် ရာဇဝတ်မှုပဲဆိုပါတော့
ဘာလဲ သိချင်နေကြပြီမှလား ……………..ဟိဟိ
ဒီနေ့ အိပ်ရာနိူးတော့ သား (မွေးစားသား literally) နဲ့ ကွန်ပျူတာ စီးတီး လို့ခေါ်တဲ့ ပန်တစ်ပ် သွားကြမယ် လို့ ချိန်းဖြစ်ပါတယ် ကွန်ပျူတာ သိပ်မကောင်းတာလဲ ပြတင်းပေါက် ချချင်လို့ပါ အဲ့တာနဲ့ ရောက်သွားကြပါတယ် အစကတော့ ဟိုဟိုဒီဒီပါပဲ လျောက်ကြည့် မျက်စိမှောက်ကြည့်တာပေါ့
အဲ့မှာ မနေနိူင်မထိုင်နိူင် နဲ့ ကွန်ပျူတာ ထည့်တဲ့ အိပ်တလုံးဝယ်ပါတယ် belkin ပါ ခုတလော အဲ့တံဆိပ် ကို သိပ်သိပ် အာရုံကျနေပါတယ် တလောကပဲ အိုင်ပေါ့ အတွက် အိတ်ကလေး ကိုအဲ့တံဆိပ်ဝယ်သေးတယ် အဲ့ကတည်းက…………….
“xxxxxxxxxxxxxxxxx………….သူ့ကိုမှ ချစ်မိနေပါတယ်…..xxxxxxxxx……တွေ့နေမြင်နေရတော့…..xxxxxxxxxxxx ဝယ်မိပြန်သေးတယ် မျက်စိထဲတဝဲလည်လည်..xxxxxxxxxxxxxxx..”အဲ့လို ဖြစ်နေတာပါ အောက်မှာ ကြည့်ပါ လှပါတယ် သိပ်သိပ် သဘောကျပါတယ် ဝယ်မိတာ ကိုနောင်တမရပါဘူး…………..
ဇာတ်လမ်းက အဲ့မှာ မရပ်ဘူးလေ ရာဇဝတ်မှု လို့ပြောထားပါတယ် ဒါလေးဝယ်တာကတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ လိမ်လည်မှုလောက်ပဲပေါ့ အောက်ကဟာကမှ တကယ့် အမှုကြီးပါ……………….
ကြည့်လိုက်တော့ ……………….ကြည့်လိုက်ကြတော့……………..SHARP AQUOS No 1 TV in Japan တဲ့ အဲ့လိုရေးထားပါတယ် ကြည့်မိတယ် ဟယ် လှလိုက်တာ ပေါ့ မီးပွင့်သွားပါတယ် သူက ကိုယ့်ကို ကြည်ကြည်နူးနူး စိုက်ကြည့်တယ်လေ အကြည့်ချင်းဆုံ ရင်တွေ ခုန်ကြပြီပေါ့ သူက ပြောတယ် အိမ်ခေါ်သွားပါလားတဲ့ ကိုယ်ကလဲ သိပ်သိပ်ခေါ်ချင်ပါတယ် မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိပြီကိုးနော်………….အိမ်မှာ မနှစ်က ဝယ်ထားတဲ့ ၂၂ လက်မ အယ်လ်ဂျီ ရှိပါတယ် အသစ်အတိုင်းပါပဲ ဒါပေမယ့် ခုတလောမှ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်စေတသိတ်တခုရှိပါတယ် အဲ့တာက တီဗီ ကြီးကြီး ကြည့်ချင်တဲ့ရောဂါပါ ဘယ်လိုက နေ ဘယ်လိုဝင်လာလဲတော့မသိပါဘူး တလောက ဆိုနီ အိမ်သီရေတာ ဝယ်လိုက်ကတည်းက လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ တီဗီ ကို သိပ်သေးတာပဲ လို့ အထင်အမြင်သေးမိပါတယ်
မချစ်ချင်တော့တဲ့ အခါ အပြစ်မြင်လာပြီလေ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း သီချင်းလဲ ဒီအချိန်မှာ နားမဝင်တော့ဘူး အဲ့တော့ ဖြတ်မယ်လို့ အကြောင်းရှာပါတယ် တွေ့ပြီ သူသိပ်သေးတယ် ၂၂လက်မ ဆိုတော့ ဘာရှိလို့လဲ ကြည့်ရတာတောင် ကြည်ကြည်လင်လင်မရှိဘူး………..ဘာမှန်းကိုမသိဘူး ကြည့်လို့ကိုမရဘူး ဘာညာ ဘာညာ ပေါ့ ဆူညံ ပူညံ လုပ်လိုက်ပါတယ် ကိုယ် သူ့ကို ပစ်တော့မယ်လေ……….အမေ့ဆီ ပစ်ရမလား မောင့် ဆီ ပစ်ရမလား (ပစ်စေချင်တဲ့နေရာ လာမန့်လို့ ရပါတယ်………….)
အဲ့တာနဲ့ ခုနက ပြောတဲ့ ကွန်ပျူတာ စီးတီးမှာ ကြည့်တယ် ကြည့်တော့ တွေ့တာပေါ့နော် သူကလဲကိုယ့်ကို ကြည့်ကြည့်နေတယ်လေ ဘာလို့ကြည့်လဲမေးကြည့်တော့ အိမ်ခေါ်သွားပါလားဟင်တဲ့ ………..
ကိုယ်က စဉ်းစားပါရစေအုံးဆိုတော့ နှစ်လုံးပဲ ကျန်တော့တာတဲ့ ခေါ်ရင် မြန်မြန်တဲ့ ပြီးတော့ သူ့ကိုခေါ်ရင် သူက လက်ဆွဲအိတ်နဲ့ပါ လိုက်မှာတဲ့ (ဘေးက ပုံက လက်ဆွဲအိတ်က အပိုပေးတာပါ တီဗီဝယ်လို့) အဲ့တာနဲ့ ဈေးမေးကြည့်တော့ ၁၂၉၀၀ ဘတ်တဲ့ ဘုရားပေါ့ ပြီးတော့ မှ သူတို့ က ၁၀၀၀ လျော့ပါမယ်တဲ့ တွက်ကြည့်လိုက်တယ် မဆိုးဘူးပေါ့……….ဘေးက အိတ်ကိုလဲ အရမ်းကိုလိုချင်နေပြီ တီဗီ ကတော်တော် အိတ်က ကဲကဲ ဖြစ်နေတယ် အဲ့လိုပဲ ကိုယ်က အပိုပေးတာ တွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် ကိုယ့်လိုလူတွေ ရှိနေလို့လဲ ဒီလို ပရိုမိုရှင်းတွေ အလုပ်ဖြစ်နေတာ အော် သူလဲရောင်းချင်ရှာမှာပေါ့လို့ ဖြေတွေးပေးလိုက်ပါတယ် သူတို့ရောင်းတာလေး တခုလောက်ဝယ်လိုက်ရင် ဒီလို ပစ္စည်းတွေ ထုတ်တဲ့ နေရာ ဥပမာ တရုတ်ပေါ့ အဲ့က လူတွေ အလုပ်ရမယ် သူတို့တွေ အလုပ်ရ ရင် သူတို့ မိသားစုတွေ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေမယ် အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ ကဲကဲ ငါ ကူလိုက်ပါမယ်လေ လို့ ဆိုပြီး “……………..xxxxxxxxxxxxxxxx…………..မျက်စိကို အနားပေးxxxxxxxxxx……လက်မှတ်ထိုးကာ ကိုယ်ဝယ် ……………….xxxxxxxxxxxxxxx…………စာရွက်ပေါ် ချိန်ရွယ် ရေးချလိုက်တယ်………..အစိမ်းတွေရယ် ထွက်ပြန်ပကွယ်…………….xxxxxxxxxxxxxxx………..စုဘူးလေးထဲမှာ ပြည့်ရန်တယ်မမြင်တယ် …………..ဒီိလိုနဲ့ ပဲ အကြွေးထဲမှာ တို့က တဝဲလည်လည်…………xxxxxxxxxxxxxxxx”…………
(မှတ်ချက် အကြွေးတော့ မတင်သေးပါ ခုက ရသမျှ လစာ ကို တလ တလ ကုန်အောင်သုံးတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ် လစာက များသော်လည်း ဘဏ်လက်ကျန်ငွေ အမြဲ ဘဲဥ ဘဲလန့်စ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဏ် က ခရက်စ်ဒစ် ကဒ် လျောက်တာ ပယ်ပယ်ချပါတယ် နှစ်ခါရှိ နှစ်ခိရှာပြီ……………အဲ့တာပဲ ခပ်ကောင်းကောင်းလို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြန်ဖြေရပါတယ် မဟုတ်ရင် ကိုယ့်လက်ဖွာပုံနဲ့တော့ အကြွေးတွေ လည်စိနစ်နေမှာ မြင်ယောင်ပါသေးတယ်)
“………….xxxxxxxxxxxxxxx………..ဒီလိုနဲ့ ပဲ……………xxxxxxxxxx………. ထောင်တန်လေးတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေ………..xxxxxxxxxxxxxx……… မိုးဆောင်းနွေ ပြက္ခဒိန်တွေ တမျိုးပြောင်းနေ”
ကြည့်လိုက်ပါ မိုက်ပါတယ်…………ဝယ်ပြီးတော့လဲ တကယ် စိတ်ချမ်းသာရပါတယ် ကိုယ်က အခွေလဲ အသေကြည့်တာကိုးနော် အဲ့တော့ တီဗီကတော့ ကိုယ့်အတွက် အဆန်ရှယ်ပါပဲလေ ဆိုပြီးတွေးတွေးကြည်နူးကျေနပ်နေရပါတယ် (ဝယ်ပြီးပြီကိုးနော်)
ဘေးမှာတွေ့လား စာအုပ်တွေ အခွေတွေ က တောင်ပုံရာပုံပါပဲ ကိုယ်က အစားရယ် စာအုပ်ရယ် အခွေ ရယ် ဆိုတာ တွေ ကိုဝယ်ဖို့ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ လက်မနှေးပါဘူး အကြောင်းကလဲရှိပါတယ် အစားက လူနဲ့တည့်တယ် ဆိုတယ်မှလား ပြီးတော့ ရှိသေးတယ် စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေတဲ့ ဟော ဂီတသံစဉ်ဆိုတာကကော လူ့လောက ကိုလှဆင်နေတဲ့ နဝင်ပီယံ လေးတွေ သုတအရသာလေးတွေပဲ မဟုတ်ပါလား အဲ့တော့ တီက အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်လက်မနှေးဘဲဝယ်ပါတယ် ဝယ်ပြီးတော့ ဖတ်လားဆိုတော့ မဖတ်ရသေးတာတွေအများကြီးပါ အခွေတွေလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ အစားတွေကတော့ ကုန်ပါတယ် ဒါတောင် တခါတခါ ခရီးထွက်တော့မယ်ဆိုရင် လောဘကြီးပြီး အရမ်းကာရောတွေ စွတ်ဝယ်ထားတဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲက ဟာတွေ ကိုမနှေးအမြန်ရှင်းရတာ တလုပ်ပါ….ထားတော့ ပြချင်တာက တီဗီ အသစ် အော် မကျန်အောင်ကြွားရမယ် ဆိုရင်တော့ တလောက ဝယ်ထားတဲ့ ဆိုနီ အိမ်သီရေတာ စနစ်နဲ့တော့ သိပ်သိပ် ကိုပလဲနံပ ဖြစ်နေတာပေါ့လေ ငှဲငှဲငှဲ ဘေးမှာရောတွေ့လား ဂျူလီယာရောဘတ်နဲ့ ရှုဂျက်မင်…..ခိခိခိ တီ့အချစ်ဆုံးတွေများစွာထဲကပေါ့လေ
ကဲကဲ ကြွားတာတွေ ပြီးတော့ စားတာတွေ လာပါမယ် ညဘက်ကျတော့ တီဗီအသစ်ဝယ်တဲ့ အထိန်းအမှတ်နဲ့ သားနဲ့ သမီး နဲ့ အတူ အမ်ပိုရီယမ်မှာ မက္ကဆီကန် အစားအစာ သွားစားကြပါတယ် တနှစ်တုံးက မက္ကဆီကိုရောက်တုံးက အချိန်တွေကို တောင်သတိရမိသေး တီသတိအရဆုံးက မာချာလာဒါ လို့ခေါ်တဲ့ ဘီယာ အမဲ ကို သံပရာသီး ဆားတွေနဲ့ သောက်တာပါ ခုဒီက အမ်ပိုရီယမ် မှာ အဲ့တာမရဘူးတဲ့ ရိုးရိုးအိတ်စ်ပို့ ဘီယာ တွေပဲရတယ်တဲ့ ညံ့ပါ့နော်………..ထားတော့ …………….သွားတာက သုံးယောက် မှာတာက ခြောက်ယောက်လောက်စားမှ ကုန်မယ့်ဟာတွေ….မှာတာကတော့ တယောက်တပွဲပါပဲ ပိုးရှင်းတွေက ကြီးလို့လေ ကြည့်ကြရအောင် စားလို့တော့တကယ်ကောင်းတယ် အဲ့တာကြောင့်လဲ မက္ကဆီကန်တွေက အဲ့လိုကောင်းတာတွေ အီတာတွေစားပြီး လုံးနေကြတာလို့တွေးမိတယ် ကျန်းမာရေးနဲ့တော့ သိပ်မညီညွတ်ဘူးထင်တယ် (စားပြီးမှ စားပြီးမှ..ခိခိ)
ပထမဆုံးပုံက grande supreme nachos လို့ခေါ်ပါတယ် နာချိုပါပဲ တီစားဖူးတဲ့ နာချိုနဲ့တော့ သိပ်မတူပါ တီစားဖူးတဲ့ နာချိုကပဲ နာချိုမစစ်လို့လားတော့မသိဘူး မုန့်ကြွပ်ပေါ်မှာ ကြက်သားကင်ရယ် ခရမ်းချဉ်သီးရယ် ငရုတ်သီးတမျိုးရယ် အာလူးရယ် ချိစ်ရယ် နောက် ခရမ်ရယ်နဲ့ ကော်ကော်စားရတာပါ ငရုတ်သီး အထူးကောင်းပါတယ် မွှန်ပြီးစပ်တာ သင်းသင်းလေး
ဒုတိယပုံက chicken quesadillas ပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မက္ကဆီကန် ပီဇာပေါ့ အပြင်အသားကတော့ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် ချာပါတီ နဲ့တူပါတယ် အထဲမှာ က ကြက်သားကင်ရယ် မဆလာတွေဘာတွေရယ် ချိစ် အများကြီးရယ် ဘေးက ဆော့်ထ်နဲ့ခရမ် တီမစားနိူုင်ပါဘူး ဒီဟာကို သိပ်မကြိုက်ဘူး
နောက်တတိယပုံကတော့ တီမှာတဲ့ အမဲသားပါ beef stake fajitas လို့ခေါ်ပါတယ် စားကောင်းပါတယ် တီက အမဲသားကြိုက်တာကိုး မက္ကဆီ ကိုမှာတုံးကလဲ နေ့တိုင်းလိုလို တခါတော့ စားဖြစ်အောင်စားပါတယ် အမဲသား ကို သံပူပြားပေါ်မှာပဲ ခရမ်းချဉ်သီး ဂရင်းပက်ပါ (ငရုတ်သီးပွ အစိမ်းရောင်) နဲ့ မကျက်တကျက်လေးကြော်တာ သိပ်ကောင်းတယ် ခုန ပြောတဲ့ မာချာလာဒါဘီယာအမဲနဲ့ လိုက်မှလိုက် အမဲသားက ချာပါတီ လိုအဖတ်နဲ့လာပါတယ် ပြီးတော့ ပဲနီလုံးကြီးတွေနဲ့ ထမင်းတူးတူးလေး တပွဲကိုလဲပေးပါတယ် ပုံမှာကြည့်ပါ နောက် ငရုတ်သီးဆော့်ထ်ရယ် ခရမ်ရယ် နောက် ခုနက ကြက်သားပီဇာ လိုဟာနဲ့စားတဲ့ ဆော့်ထ်လိုမျိုး (ခရမ်းသီးထင်တယ်) တမျိုးထပ်ပေးပါတယ် စားပုံကတော့ ချာပါတီ အရွက်ပေါ်ကို အမဲသား ခရမ်းချဉ်သီး ငရုတ်သီး စတာတွေတင် ပြီးတော့ ဆော့်ထ်တွေဆမ်း ပြီးရင် လိတ်ပြီးတော့ ပါးစပ်ထဲထည့် ဝါး ကောင်းမှကောင်း…
အဲ့တာတွေအကုန်စားလိုက်တာ စုစုပေါင်း ၁၀၂၀ ဘတ်….၉၉၆ဘတ်ပါ အပိုဆုကျေးက ၂၀ ဘတ် မွေးစားသားကပြောပါတယ် ဆားဗစ်ချာဂ်ျ ယူပြီးသားတဲ့ ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့ နောက်ပြီး အခွန်ကလဲ ၇ % ယူထားသေးတယ်တဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်တခွန်းပဲ
coz it isanice thing to do, and that is what princesses do
we help people လို့ ဟိဟိဟိ ပြောရတာ အရသာ အရသာ…
အောက်ဆုံးက ပုံက တီနဲ့ မွေးစားသမီးပါ (လှတယ်နော်) မွေးစားသားပုံကိုတော့ နောက်မှတင်ပေးမယ် အစက ရိုက်ထားတာတွေ အက်စီတန့်တယ်လီး ဒလိဒ် လိုက်မိလို့ မကျန်တော့ဘူး ပြီးတော့ သူက ရှက်တတ်တယ် နောက်တော့ တင်ပေးမယ်……
မနက် ၂ နာရီခွဲမှာ စားနေတဲ့ ဆပ်ပါပါ စာရေးနေရင်းနဲ့ ဆာလာတာနဲ့ ထမင်းထတည်ပါတယ် ဘေးစွန်ကပထမပုံက အမဲသားကြက်သွန်ဖြူနီနဲ့ အစပ်ကြော်တာပါ တီ့ကိုကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝက်ဝံရဲ့ ချစ်ချစ် ကြော်ပေးတာပါ ဘေးကတော့ စားချင်နေတဲ့ ကြက်ဥ ဘာဖြစ်လို့မသိ ခုနက ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကြက်ဥ မကျက်တကျက်ကို အရမ်းစားချင်လာတာနဲ့ ကြော်စားလိုက်တယ် နှစ်လုံးပါ တလုံးဆိုမဝပါဘူး
စားနေတဲ့ပုံကို ဘေးမှာတော့ ကြည့်လိုက်တော့ ဒီလို အချိန်မှာ ဒီလိုစားနေတာ ဘယ်လိုပိန်မလဲနော်…………..ဟူး………………………..
ပိုစ့်ကိုတင်ပြီးမှာ ထကြော် ပုံရိုက်ပြီး ပြန်လာတင်တာပါ ခိခိခိ ………………မနိူင်ဘူးနော်
Posted on June 27, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီတီချမ်း23 Comments on ကြွ…ကြွာ…ကြွား…
ကဲပိုစ့်ကို ပြန်ဆက်မယ် အဲ့နေ့မနက်က ခေါက်ဆွဲသုပ်စားပါတယ်… ဘေးက မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ပါ ဒီလိုကျဲနေတာနော် ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါးတွေကလဲ ပျက်နေပါပြီ အရသာတော့ မဆိုးပါ အချိုမှုန့်ထည့်တာကိုးနော်
ဘေးက လက်ဖက်ရည် ပါ တိုင်ကီ အမြဲ သောက်ပါတယ် ရိုးရိုးခွက်ဆိုရင်တော့ နှစ်ခွက်ပေါ့ ကိုယ်တို့ ကျိုင်းတုံမြို့ကို လွမ်းပါတယ် လက်ဖက်ရည် ကို အဲ့လို တိုင်ကီ ဆိုရင် တကယ့် တိုင်ကီ နဲ့ပါ အရင်ဘီယာတွေ သောက်ကြတဲ့ ငါးကြင်းခွက်ကြီးတွေ သိတယ်မှလား အဲ့တာနဲ့ သောက်ကြရတာ သိပ်သိပ်မိုက်တယ် ခုတောင် အဲ့လိုခွက်နဲ့ မြို့တော်ခန်းမ နားက လက်ရွေးစင်က ကော်ဖီအေးရောင်းသေးတယ် ထင်တယ် အဲ့လိုခွက်တောင် သိပ်မတွေ့တော့ဘူး ထားပါတော့ လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုတော့ သေချာကြည့်လိုက် မြင်ရအောင် အနီးကပ်ပုံ ရိုက်ပေးထားတယ် ချိုးတွေ ကပ်နေတာ တွေ့လား ရှိသမျှလူက ဒီနေရာကနေ သောက်တာကိုးနော် ပါးစပ်ကြီးတွေနဲ့လေ သေသေချာချာတွေးကြည့်ရင်တော့ ရွံစရာကြီး ဒါပေမယ့် ကိုယ်သည်လဲ ရွှေပေမို့…
မညှပ်ရတာ ၆ လရှိပြီလေ တီက အစွဲရှိတယ် ညှပ်နေကြပဲ အဆင်ပြေတယ် ဘန်ကောက်မှာ မညှပ်ဖြစ်ဘူး အဲ့တာနဲ့ တော်တော်တောင် ရှည်သွားတယ် အမှန်က အရှည်ထားလဲ ကေတာပါပဲ လှတောင်လှနေပြီ ဒါပေမယ့် လကုန်ကျတော့ အာစီယံ မီတင်ရှိလို့ ပရယ်ဇင်တေးရှင်း ကိုကေရှည်နဲ့ ပေးပြီး ဆက်ရှင် ချယ် (session chair) ရမှာ မကောင်းပါဘူးဆိုပြီး ညှပ်လိုက်တာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပဲ ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး…. အဲ့တာ က ဂမုန်းပွင့်ရှေ့ က လမ်းက New Top ဆိုတဲ့ ဆိုင်မှာ ညှပ်တာ အမြဲညှပ်နေကျဆိုင် အရင်က မြရိပ်ညိုက အဖိုးကြီး အုပ်စုလေ နောက်ပိုင်း ခု စီးတီးမတ်နေရာက princess ဆိုလား ဖွင့်လိုက်သေးတယ် စကားစပ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့နေရာက တရုတ်အယူအရပြောရင် လေနဲ့ရေ (ဖုန်းရွှေ) မကောင်းဘူး အရင်က အဲ့နေရာမှာပဲ ပုဂံ မင်းသမီး ဆိုလား pagan princess ဆိုလား ရန်အောင်နဲ့ကျော်ညာတဲ့ ရက်စတော်ရင့် ဖွင့်ဘူးတယ် မပေါက်ဘူး ပိတ်သွားတယ် နောက်တော့ တခြားဆိုင် တဆိုင်နှစ်ဆိုင်လောက်ထင်တယ် ကားရေဆေးဆီထိုးလားမသိ ဖွင့်လိုက်သေးတယ် ပိတ်တာပဲ ခုတော့ စီးတီးမတ်ပေါ့ ထားပါလေ
ဆံပင်ညှပ်ဖို့စောင့်နေရင်းနဲ့ ရှေ့နားက “ရွှေရည်” လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (မြန်မာမုန့်အတော်များများရသော အင်း လစ်ထဲက ပြည်ပလာတာ သုပ်လဲမစားခဲ့ရပြန်ဘူး ကတောက်-၂)မှာ ခဏ ထိုင်တော့ လက်ဖက်ရည်တခွက်နဲ့ မုန့်ဦးနှောက်ပါ ကုန်မှ ရိုက်ဖို့သတိရတယ် အမှန်က ကင်မရာပါမလာလို့ မောင်က အိမ်ပြန်ယူပေးရတာ မောင်တောင် မိုးမိသွားသေးတယ် …..း=(
ဆံပင်ညှပ်ပြီးတော့ အာလီးယောင့်စ်ဖောင်းဆဲ (ဟိဟိ လျှာယားတာ) မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ အမက မုန့်ကျွေးမယ် ဆိုတော့ လိုက်အုပ်ပြန်ပါတယ် အင်းယားလမ်းက ခေမရဌ် နားက ကွန်ပျူတာရောင်းတဲ့ တက်ကနိူလန်း မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ပသျှူးခေါက်ဆွဲပါတဲ့ အမှန်တော့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲပါပဲ စားလို့ ကောင်းပါတယ် မဝလို့ နှစ်ပွဲစားရတယ် တပွဲ ၁၅၀၀ ကျပ် ငပိထောင်းကြက်သွန်ချဉ်လေးကလဲ ကောင်းမှကောင်း အင်းယားလမ်းဆိုလို့ လစ်ထဲက မစားခဲ့ရတာ နောက်တခုက ဟက်ပီးက မျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲ (ကတောက်-၃) ဒေါ်ရီတာ သွားစားတဲ့ဆိုင် တီက အမြဲ သွားသွားစားတယ် အဲ့ဆိုင်က ငှက်ပျောသီး ပျားရည်လဲ သိပ်ကြိုက်တယ် မိုဟီတို လဲကောင်းတယ် ဒီတခါ မစားခဲ့ရတာတွေများလို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ငါတော်တော် တိုင်း မန်နေ့ဂ်ျမန့် ညံ့နေတယ်လို့ တွေးမိတယ် အချိန်ကိုလေ ……………ဟွန်းနောက်တခါတော့ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်မှဖြစ်မယ် လစ်ကိုကြိုလုပ်ထားတာတောင် အချိန်မရလို့ မစားခဲ့ရတာ တွေအများကြီး မြေနီကုန်းပန်းခြံနားက ဝက်ခေါင်းသုပ်နဲ့ ထမင်းပေါင်း (ကတောက်-၄) သမိုင်းလမ်းစုံက စွဲလမ်း ကြေးအိုး (ကတောက်-၅) တီက ကြေးအိုးဆိုရင် အဲ့က ဟာကိုပဲ ပိုကြိုက်ပါတယ်…ထားလိုက်ပါတော့လေ မစားရတာတွေ ပြန်ပြောပြရတာ တကယ်အကုသိုလ် သိပ်များတာပဲ ……
အဲ့မှာ ခဏနေပေးပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ စမ်းချောင်းက သုံးနေကြ ကွန်ပျူဆိုင် ကို သွားပါတယ် သူငယ်ချင်း (အရမ်းခင်တယ် အရမ်းလဲ -ျစ်တယ် ခိခိခိ) ရဲ့ဆိုင်ပါ သူက ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် တီ့ကို အမြဲ ကျူနေကျ အဲလေ ကူနေကြပါ တီ့ကွန်ပျူတာ ကိုသူပဲ အမြဲဖျက် (အဲလေ စကားမှားပြန်ပြီ) ပြင်ပေးနေကြပါ ပဒုံမာ ကွင်းပတ်လည်က ဆိုင်တွေနားမှာ ဖွင့်ထားတာပါ အရင်က ယွန်းဝတီ (လွင်မိုးဖွင့်တဲ့ အခွေဆိုင်-ပြုတ်) ရဲ့ဘေးနားမှာပါ သူ့ဆိုင်ခန်းက network king လို့ ခေါ်ပါတယ် (ကျော်ညာကျော်ညာ) တီ့နာမည်သာပြောလိုက် ရိုက်ထုတ်လိမ့်မယ် အဟဲ ကြုံရင်သွားအားပေးကြပါနော် သုံးရတာ သိပ်သိပ်သိပ်သိပ် အဆင်ပြေပါတယ် ကောင်လေးတွေလဲချောတယ် ခိ…..အင်း ပဒုံမာ ကွင်းပြောရင်းနဲ့ သတိရမိတာက ပဒုံမာ လမ်းထဲက ရွှေမြို့တော် ချစ်တီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပါ မသောက်ခဲ့ရဘူး နောက်ပြီးတော့ ပူတီ ပလာတာ ချစ်တီးထမင်း (ကတောက် -၆-၇-၈) နောက် စမ်းချောင်းလမ်းထဲက ဝေဝေဖြိုး ရခိုင်မုန့်တီ (ကတောက်-၉) အင်း……………အကုသိုလ်တွေ အကုသိုလ်တွေ…………………………..အော် အစာအဟာရ
ကဲ ဆက်ပြောရရင် ခုနက သူငယ်ချင်းနဲ့ စမ်းချောင်းလမ်းထဲမှာ လက်ဖက်ရည်သွားသောက်ပါတယ် ဆိုင်နာမည်က လေးညို့ရှင်ပါ အားမပေးချင်ပါဘူး ကြံ့ဖွတ်တွေ ဖွင့်တယ်ကြားလို့ပါ ဒါပေမယ့် လက်ဖက်ရည်က ကောင်းတော့လဲ………………အင်း မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တခုကို စိတ်က မပါပေမယ့် လျှာ ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့ လုပ်ရပါတယ် …….ပြီးတော့ ပဲနံပြားစားတယ် သူငယ်ချင်းက နံပြားထောပတ်သုပ်စားပါတယ် အော် နောက်တခု အဲ့ဆိုင်ကို မကြိုက်တာ က child labor သုံးတာပါ ကလေးတွေက တော်တော်ငယ်နေပါသေးတယ် ၈ နှစ် ၉ နှစ် တချို့ဆို ပိုတောင်ငယ်သေးသလိုပဲ ဆက်ဆံရေးကလဲ မပြေပြစ်ပါဘူး ကောင်းတာဆိုလို့ လက်ဖက်ရည်တမျိုးပဲရှိတယ် ဆက်ပြောရရင်တော့ အဲ့ဆိုင်ရှေ့က စမူဆာကြော် (ကတောက်-၁၀) အမဲအူပြုတ် နဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုး (ကတောက် ၁၁-၁၂)………………..အင်း အကုသိုလ်
အချိန် စီမံခန့်ခွဲမှု နဲ့ အစားတလုပ် တအားအလုပ်ရှုပ်……
အင်း ဘဝဘဝ ငါရွေးချယ်တဲ့လမ်းပါတကား………………………….
ပြီးတော့ အဲ့နေ့ညကတော့ အမေ့အိမ်ပဲ ပြန်ပြီး လိမ်လိမ်မာမာ အိမ်ထမင်း စားပါတယ် အခေါက်တိုင်း ပြန်တိုင်း အိမ်မှာ အမေနဲ့ စကားပြောချိန်တောင်မရှိလောက်အောင် အပွိုင့်မန့်တွေက များပါတယ် နေ့တိုင်းနီးပါး အိအောက် eat out လုပ်ပါတယ် မကောင်းပါဘူး ကျန်းမာရေးအရကော အမေ့အပေါ်လစ်ဟင်းတဲ့အတွက်ကောပါ အမေက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေ ချက်ကျွေးပါတယ် ကြည့်ပါ ကိုယ်လဲချက်တတ်ပါတယ် အဲ့တော့ ချက်နည်းပါတင်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်…..ပထမဆုံးကတော့ ရှယ်တကာ့ရှယ် ဆူပါရှယ် လျှာတောင်ချာချာလည် မူလလက်ဟောင် ဒေါ်ဒေါ်ချိုက် ဝက်နံရိုးကြော်ပါ အမေ့နာမည်က မchoice ပါ ခုတော့ ဒေါ်choice မကြာခင် ဖွား choice ပေါ့…. အဲ့နာမည်နဲ့ပဲ အပ်ချုပ်ဆိုင်ဖွင့်ပါတယ် အရင်က သရဖူမှာ ကြေငြာပါတယ် ခုတော့ လျော့လုပ်နေပြီ ဖြစ်လို့ မကြေငြာတော့ပါဘူး မလုပ်စေချင်တော့ဘူး သူကတော့ မလုပ်ရင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလို့ပြောပါတယ် အိမ်လည်အတင်း တုတ် ဖဲလှည့်ရိုက်ပေါ့လို့ ပြောတော့လဲ အမေက ဖဲမရိုက်တတ်ပါဘူး ဘုရားစူး တရုတ်မပါ တီတို့ကတော့ ကလေးဘဝကတည်းက ဖဲဆို ၁၄-၅မျိုးလောက် ရိုက်တတ်တာ ခိခိ ကဲကဲ ဟင်းချက်တာ ပြန်သွားရအောင်နော်…
ဆီအိုးကို အဲ့လို ပူအောင်တည် ပြီးရင် နံရိုးတွေထည့် ကြော်ပေး (အော် အင်ပေါ့တန့်တစ်ပ် important tip = ဘာပဲကြော်ကြော် ကြက်ဝက်သားငါးပေါ့ ကျက်ပြီဆိုရင် နောက်ဆုံး ဆီကို အသေပူနေအောင် မြင့်ထားပြီးတော့ မှ ဆီစစ်ပေါ်ကနေ ဆယ်ပါ အဲ့တာဆို အကြော် ကိုဆီသိပ်မကပ်ပါဘူး) ……
နောက် ဟင်းရံတွေကတော့ အသည်းကြော် ချက်နည်းက တခါရေးပြီးသားနော် (တီ့အသည်းစွဲ)နဲ့ ကြံမဆိုင်း ဝက်နံရိုးပါ အမေ ကိုယ်တိုင် နှပ်တဲ့ ကြံမဆိုင်ပါ အမေ က တနှစ်တခါ အရွက်ပေါ်ချိန်ဆိုရင် ကြံမဆိုင် နှပ်ပါတယ် မုန့်ညှင်းချဉ်ဖတ်လဲတည်ပါတယ် ပိုးတီတို့ ခါကြက်ဥ တို့ ဂျူးမြစ်တို့နဲ့ ပေါ့ အချို အစပ် အမျိုးမျိုးတည်ပါတယ် အဲ့တာတွေ သင်ရအုံးမယ် အမေ့ဆီက ……..
ဒါကတော့ ရှယ်တကာ့ရှယ် ဆူပါရှယ် လျှာတောင် ချာချာလည် နင်ဘယ်သူလဲမေးရတယ် ဆိုတဲ့ မူလလက်ဟောင်း ဒေါ်ဒေါ်ချိုက် ဝက်နံရိုးကြော်ပါ……
ဘေးက ဘလက်လေဘယ်က သူ နဲ့ သူ့ သားအငယ်နဲ့ သောက်ကြတာ တီမသောက်ဘူး………………………..
Posted on June 26, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ခရီးသွားခြင်း, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အသားကြော်12 Comments on ရန်ကုန်-၂- (၁၂ ရက် ဇွန် ၂၀၁၀ ခုနှစ် စနေ) ဝက်နံရိုးကြော်
ဒီရက်ပိုင်း ကိုယ်စိတ်ညစ်နေပါတယ် တင်တဲ့ပိုစ့်တွေ ဘတ်ကြည့်ရင်သိမှာပါ ကိုယ်ကပျော်ပျော်ပဲ နေတတ်တဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ်စိတ်ညစ်ရင် သိပ်သိသာတယ် မျက်နှာကလဲ ပျက်နေတာပဲ (စကားအရပြောတာနော်) မနေ့ညကလဲ တညလုံးငိုရတယ် အိပ်မပျော်ဘူး ဒီနေ့လဲ ငိုရသေးတယ်
ဘဝက ဒီလိုပါပဲ လို့ဖြေပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင့်ကျက်လှပြီထင်နေတာ အမှန်တော့ အလကားပဲ
အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘယ်သူမဆို ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် မရင့်ကျက်ဘူးမှတ် (တီချမ်း ဖီလော်)
စိတ်ညစ်ရတာ တယောက်ကြောင့် ဒါပေမယ့် အမြဲလိုလို ကံကောင်းတတ်တဲ့ကိုယ်က တခြားတယောက်ကြောင့် ပြန်ပျော်ရပြန်ပါတယ် စိတ်ထားကောင်းရင် ကံကောင်းတယ်လေ တကယ်ပါ ကိုယ်က တနင်္ဂနွေလေ တနင်္ဂနွေတွေဆိုတာတဲ့ စိတ်ကောက်ရင်ကောက် မကောက်ရင် ဆံပင်ကောက် မကောက်ရင်ဖင်ကောက်တဲ့
ကိုယ်က ၃ မျိုးလုံးကောက်တယ် ထင်ပါတယ် သို့သော် စိတ်ထားလေးကတော့ ကောင်းရှာတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်မို့လို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး ဒီကောင်လေးမဆိုးဘူး ဆိုတဲ့ အထဲကပါ ကိုယ်ကဖြူစင်တယ် ရိုးသားတယ် ပွင့်လင်းတယ် လူတွေကို ကူနိုင်တဲ့ဘက်ကအမြဲကူတယ် တခါတခါတော့ စိတ်ကောက်တတ်တာ ဝန်ခံပါတယ် ထားပါတော့ လိုရင်းပြောရရင် အချစ်ရေးအဆင်မပြေလို့ စိတ်ညစ်ရသော်လည်း စိတ်ထားကောင်းသော ကောင်လေးဖြစ်တာမို့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက သိပ်သိပ်သိပ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်လေးကို စာတွေနဲ့ပိပြီး မအားတဲ့ကြားက ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်ဆိုပြီးလွှတ်ပေးကြတယ်
ကောင်လေး ကောင်းမှုကြောင့် ဒီနေ့စိတ်တော်တော်ပျော်ရပါတယ် ကျေးဇူးပါ
ညနေကျတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာ ဖွင့်ဖွင့်လိုက်ချင်း ဘန်နာလှလှလေးတွေ ဂျီတော့ ကနေ တုံတုံနဲ့ တက်လာပါတယ် မြင်လိုက်တာနဲ့ ပျော်သွားစေတဲ့ဘန်နာမျိုးပါ ကိုယ်သိပ်ကြိုက်ပါတယ်
ဒီဇိုင်း ကိုလဲကြိုက်တယ် အရောင်ကိုလဲ ကြိုက်တယ် ဘန်နာရှင်ကိုလဲ သိပ်သိပ်သိပ် ကြိုက်ပါတယ် အဲလေ စကားတွေ ရောကုန်ပြီ…
ပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရောင်လှလှ နုနုလေးတွေ ကို သေသေချာချာ လုပ်ပေးတဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်လေးကိုလဲ သိပ်သိပ်ကြိုက်ပါတယ် …
အဲ့တာကြောင့် ရန်ကုန် တွေ မန္တလေးတွေ ကိုခဏ ရပ်ထားပြီး ကြားဖြတ် တင်ပေးပါတယ်
ဘန်နာရှင်အတွက် စပက်ဂတီ ပါ
သူကတော့ ယူရိုပီယမ် အစားအစာတွေ ချက်လေ့ရှိတဲ့ ရှက်ဖ် ဆိုတော့ ကိုယ်ချက်တဲ့ စပက်ဂတီ က သူ့အတွက် ရယ်စရာဖြစ်နေမှာပါ သို့ပါသော်လည်းပေါ့လေ စေတနာတော့ အများကြီး ပိုထည့်ထားပါတယ် ရှယ်ပေါ့ ဇွန်းကြီးကြီးလဲ တပ်ထားပေးတယ်
ပထမပုံကတော့ သံလွင်ဆီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ရယ် ဘာဘာညာညာတွေပါတဲ့ အမွှေးအကြိုင်ပါ ဘေးကတော့ စပက်ဂတီ ခေါက်ဆွဲခြောက်ပါ ဘေးပုံက သံလွင်ဆီ နဲ့ ဟင်းခတ် ကိုပဲ ပုံကြီးနဲ့ ပြန်ပြထားတာပါ တတိယ ပုံက ခရမ်းချဉ်သီးဆော့်….အဲ့တာတွေ အကုန်က ကြိုက်တဲ့ တံဆိပ် ဝယ်လို့ ရပါတယ်
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တီက စပက်ဂတီ ကို တခါမှ ကိုယ်တိုင်မချက်ဘူးပါဘူး အရင်တခါက တီ့ မွေးစားသားလိုဖြစ်နေတဲ့ နီပေါက ကောင်လေးချက်ကျွေးတာ စားဖူးတယ် သူငယ်ချင်းအမကြီး (မအေမီ) ချက်ကျွေးတာ စားဖူးတယ် အဒေါ်ချက်ကျွေးတာစားဖူးတယ် ရှန်ဟိုင်းတုံးက အချစ် ဂျာမန် ကောင်လေး (top ten ထဲမှာပါတယ်)ချက်ကျွေးတာစားဖူးတယ် ခုလဲ မွေးစားသားချက်တာပါ ဘေးကနေ ဓါတ်ပုံရိုက် ပြီးတော့လိုတာ လုပ်ပေးပေါ့ ခုတော့ ချက်တတ်ပါပြီ ကိုယ်ကအဲ့လိုပဲ သိပ်တော်တာ (ဖြူဖြူပြောသလိုဆိုရင်တော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပါပဲ) တခါပြရင်တတ်ပြီ……..အရင်တုံးကချက်တာတွေလဲ အဲ့လိုပဲ ယိုးဒယားရောက်မှ ချက်ရတာ အရင်အိမ်မှာက ရေတောင် ခပ်မသောက်ရဘူး အမွှေးလဲ ဘာအမွှေးမှ မီးမလောင်ဘူးဘူး
ဒီအပေါ် ပထမ ပုံက ရိုစ်မေရီ လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ပါပဲ အီတာလီယံ အမျိုးအစားနေမှာပေါ့ တီကတော့သိပ်မသိပါဘူး မွေးစားသားနဲ့သမီးဝယ်လာတာ ကိုသုံးလိုက်ကြတာပါပဲ နောက်ဘေးက အိမ်မှာရှိတဲ့ ဗူးမှို ရယ် ကြက်သွန်ဖြူနီ ရယ် ခရမ်းချဉ်သီးရယ်ပါ ဘေးနားက အသားကြိတ်ထားပြီးသား တီ့သဘော ဆိုရင် တော့ အမဲသားနဲ့ စားချင်တာပါ ကလေးတွေက မစားဘူး ပြီးတော့ အိမ်မှာကလဲ ဝက်သားပဲ အသင့်ရှိနေတာဆိုတော့ ဝက်သားပဲ အလွယ်သုံးလိုက်ပါတယ် အိမ်မှာရှိတာနဲ့ ဖြစ်အောင် စီစဉ်တတ်တာ အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းပီသတာပါ ငှဲငှဲ (ဒေါ်ရီတာ တို့ ဘယ်တော့မှ လိုက်မမှီမယ့် ဝိသေသတွေပေါ့)
ပထမဆုံး ကြက်သွန်နီ ကို သံလွင်ဆီနဲ့ ကြော်ပါမယ် ဆီကိုအများကြီးမထည့်ပါနဲ့ ဝက်သားကလဲကြော်ရင်းဆီထွက်ဦးမှာ မို့လို့ပါ ကြက်သွန်နီ နွမ်းရင် ဝက်သားထည့်ကြော်ပါမယ် ပုံကိုကြည့်ပါ
ပြထားတဲ့အတိုင်း ဝက်သားကို တဖြည်းဖြည်းချင်းမီးအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးပါ ဝက်သားတွေ ကောင်းကောင်းကြေကုန်ပြီဆိုရင် သူ့ဘာသာရေထွက်လာပါမယ် အဲ့ရေတွေကို ခန်းအောင် ဆက်ကြော်ပေးပါ
ဝက်သားရေခန်းလောက်ပြီဆိုရင် ကြက်သွန်ဖြူ ကိုထည့်ပါမယ် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် ပြီးတော့ လျှာရှည်ပြီး နနွင်းမှုန့် နည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ် ကြိုက်ရင်ထည့်ပေါ့ တီတို့ကတော့ ဆေးဘက်ဝင်တယ်ဆိုပြီး ထည့်လိုက်တာပါပဲ တတိယပုံပါ သေချာမမြင်ရရင် ရိုက်ကလစ်နဲ့ ချဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် အဲ့တာဆိုရင် နနွင်းမှုန့်လေးတွေ ကအစ သေချာမြင်ရမယ်
ပြီးရင် ငရုတ်သီးမှုန့် ထည့်ပါမယ် တချို့က ငရုတ်သီး အခြောက်ကိုလဲ ထည့်ကြော်လေ့ရှိပါတယ် ကြိုက်တတ်သလိုပါပဲ ပြီးရင် ခုနက နနွင်းမှုန့်နဲ့ အခု ထပ်ထည့်တဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်တွေ နဲ့မွှေးလာအောင်ကြော်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ ခရမ်းချဉ်သီးထည့်လို့ရပါပြီ…. နောက်ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေ လိပ်သွားတဲ့အထိ မီးအေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းလေးကြော်ပေးပြီးရင် မှို ထည့်လို့ရပါပြီ
မှိုထည့်ပြီး ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း နူးနေအောင်ကြော်ပါမယ် ပြီးရင် လိုအပ်တဲ့ဆားအချိုမှုန့် နည်းနည်းထည့်ပါမယ် ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီး ဆော်ထ် ခုနက ပုလင်းနဲ့ဟာ ကို နည်းနည်းထည့်ပါမယ် ပြီးရင် မီးနဲ့ ဆက်လှိမ့်ပါမယ် ပုံတွင်ရှု ဟင်းအနှစ် ပြစ်ပြစ်ကလေးရပြီဆိုရင် ……
ခုနက ကြက်သွန်ဖြူပါတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ကိုထည့်ပါတယ် ပြီးရင် ရိုစ်မေရီ ကိုလဲဆက်ထည့်ပါတယ် ဘေးက ပုံက ပုံကြီးချဲ့ထားတာပါ သေချာမြင်ရအောင် ရှက်ဖ် ပြောတာကတော့ သစ်ကြပိုးတွေ ဖာလာတွေပါမယ် ထင်ပါတယ် ကိုက အဲ့ဒီ ရိုစ်မေရီကို အစက ကွမ်းယာထဲထည့်စားတဲ့ စမုံစပါးလို့တောင် ထင်နေမိသေးတယ် ဟိဟိ ပြီးရင်တော့ ဟင်းကို အနှစ်ဖြစ်တဲ့အထိ ဖြည်းဖြည်းကြော်ပေးမယ်နော်
အားလုံးပြီးရင်တော့ ရေလိုသလောက်ထည့်ပါ ပြီးရင် ဆူအောင်ဖြည်းဖြည်းလေး ထပ်တည်ပေးထားပါ
ဘေးက ပုံက ခုနက စပက်ဂတီ ခေါက်ဆွဲကို ပြုတ်ပါမယ် ပြုတ်တဲ့အခါ ဆားနည်းနည်းထည့်ပြုတ်ပါမယ် ဟင်းအနှစ်ကို ပေါ့အောင်ချက်ထားရင် ခေါက်ဆွဲကိုနည်းနည်းလေးအောင်လုပ်တဲ့သဘောပါ သွေးတိုးနှလုံးဆီးချိုရှိရင်တော့ ကြည့်ကျက်ချက်ပေါ့နော် ….အသက်ကိုဥာဏ်စောင့်လေနော်…
အရေးကြီးတာက ခေါက်ဆွဲပြုတ်တာပါ အထုပ်မှာတော့ ၈ မိနစ် ပြုတ်ရင်အကောင်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ် တီကတော့ ပြုတ်ကြည့်လိုက်တယ် စားကြည့်တယ် မကေဘူး
၁၀ မိနစ်အထိထားတယ် စားကြည့်တယ် မကေသေးဘူး
အဲ့တာနဲ့ အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ၁၅ မိနစ်အထိ ပြုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် အဲ့တော့မှပဲ ကေသွားတော့တယ်
အဲ့တော့ ကိုယ့်အကြိုက် သူ့အကြိုက်ပါပဲ ကြိုက်သလိုသာချက်စားပါ တီတောင် (တီကောင်မဟုတ် သေချာဘတ်ရန်) ဟင်းအနှစ်လေးချက်ရင်းစဉ်းစားမိသေးတယ် အခု အနှစ်ကို ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲနဲ့စားတော့ လဲရတာပဲလို
အဟေးဟေး ရှမ်းနဲ့ အီတလီ တမျိုးတမြည်ပေါ့လေ နော့ ကဲကဲ အောက်မှာ ရှုပါ
စပက်ဂတီပါ မဆိုးပါဘူး စားလို့ ကောင်းပါတယ် ……………ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်တို့ မြန်မာပြည်ဖြစ် စစ်စစ် နန်းကြီးသုပ်လောက် ကို ကောင်းတယ်မထင်ပါ နောက်နေ့မှ နန်းကြီးသုပ် ကိုပဲမှုန့်နိုင်းချင်းနဲ့ ကြက်သားအနှစ်ရှယ်ရှယ်လေးနဲ့ချက်စားမယ် လို့တေးထားလိုက်ပါတယ်
post လဲရေးပြီးသွားရော ရေးပြီးတဲ့ အချိန်ကို မှတ်တော့ ရက်စွဲက ၂၅ ဖြစ်နေတာ သတိထားမိတယ်
ပျော်သွားပြန်ပါတယ် လခ ထုတ်မယ်လေ
ဝေး………………………………………….ဒီနေ့ ပြန်ပျော်ရတဲ့အတွက် ကောင်လေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပန်းတိုင်ကိုရေထဲပိုက်ချတယ် တံငါသည်တွေက ပိုက်ဆုံးရင် ဘာဘာညာညာ ဆွဲတယ် ပန်းတိုင်ဆိုပြီး လျောက်ဖောနေပါတယ် ကောင်လေးရေ……………………ကျေးဇူး…ပန်းတိုင်ရောက်ရင် ကေတာပါပဲ
Posted on June 24, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ခေါက်ဆွဲ6 Comments on ဘန်နာရှင်အတွက် စပက်ဂတီ
ညက တညလုံး အိပ်မရတာ
Posted on June 24, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ13 Comments on ညက…
ကဲလာပြီ လာပြီ ဒေါ်သက်ရီ…………..
ပြီးတော့ ကိုယ်ကရောက်ရောက်ချင်း ငတ်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ ထမင်းဟင်း ကိုတောင့်တပါတယ် အဲ့တော့ ကိုယ့်ကို ပို့ရင်း အိမ်နဲ့နီးတဲ့ အောင်သုခ ကိုရောက်သွားပါတယ် ပထမ ပုံက အလကားပေးတဲ့ လက်ဖက်ပါ မိုက်တယ်နော် ဘေးပုံက အမ ရဲ့ ကြက်သား ကာလသားရယ် ကိုယ့်ရဲ့ ဆိတ်ကလီစာ အူကြမ်းရယ် အမ ရည်းစားရဲ့ ဝက်ချိုရယ်ပါ နောက် ဟင်းရံအနေနဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော်မှာပါတယ် နောက် ငငိရည်ကော ငပိထောင်းကောမှာစားပါတယ် ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ရှလွတ်ရှလွတ်…စိတ်ဆိုးကြပါ ရပါတယ် မုဒိတာပေါ့ တီကတော့ မေတ္တာထားပါတယ် အဲ့တာကြောင့်ဒီလို အပင်ပန်းခံပြီး သေချာရိုက်လာ တင်ပေးတာပေါ့နော် အောင်သုခကတော့ စေတနာ ကိုသဘောကျလို့တီက အမြဲလိုလိုသွားစားတတ်ပါတယ် စားလို့လဲကောင်းတယ် အရသာလဲရှိတယ် တီကတော့ ကြိုက်တယ် အထူးသဖြင့် စေတနာ ကောင်းတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ထမင်းဆိုင်ဆိုတာ အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်လို့တီကတော့ ထင်တယ် တီလဲဆိုင်ဖွင့်ရင် အဲ့လိုစေတနာ တွေအများကြီးထားမယ် အောင်သုခ ကိုအကောင်းရေးပါတယ် အောက်ကျရင် နောက်တဆိုင် ကိုမကောင်းရေးမှာမို့လို့ပါ
ကြက်ပေါင်းဆေးနဲ့ပါ ဘေးက အာလူးကင် နောက်မှို ပြောရပါအုံးမယ် ကောက်ရိုးမှို သုံးလုံးကို ခြမ်းလိုက်တော့ ခြောက်ခြမ်းမရဘူးလား အဲ့ဒီခြောက် ခြမ်းကို တုတ်နဲ့ထိုးလိုက်တော့ တကင် ၄၀၀ ဖြစ်သွားပါတယ် ဈေးထဲမှာ ဝယ်ရင် တဆယ်သား ၂၀၀ ၂၅၀ ပေါ့ အလုံး ၂၀ ၃၀ လောက်တော့အသာလေးပါ စားဖို့မတန်ဘူးပြောတာပါ ဆိုင်ရှင်တော့ ကိုယ့်ဘလောခ် လာမဖတ်ဘူးထင်ပါတယ် သူများစီးပွားရေး တုတ်နဲ့ထိုးသလိုဖြစ်နေလို့ပါ သူကလဲ တုတ်နဲ့ထိုးပြီးရောင်းတာပါပဲ…နော်……………အဲ့တော့ ကျေပါတယ်ပေါ့ ငွေနှင်းမှိုကလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ နှစ်ဖတ် သုံးဖတ် ကို တကင် ၄၀၀ ပါ မတန်ပါဘူး ရောက်ရင် သွားမစားကြပါနဲ့ (အော် ပြောမိပြန်ပြီ မကောင်းဘူးနော်)
ခြုံပြောရရင် မာလာဟင်းလေးတမျိုးပဲကောင်းပါတယ် ကျန်တာ တော်တော်များများက ကောင်းလဲမကောင်း တန်လဲမတန်ပါ နောက်တခါဆိုရင် မစားဖြစ်တော့ဖို့ များပါတယ် …………တကယ်ပြောတာ
အော် ဆားဗစ် ဆားဗစ်…………………..စ်စ်စ်စ်
ရန်ကုန် ၂-၃-၄-၅- ဆို့ မန္တလေး ၁-၂-၃ တို့ ဆက်လက်ထွက်ရှိလာမည် မျှော်……………..
ပြောဖို့တခု ကျန်သွားလို့ ပြန်ဝင်လာရေးတယ် အကုသိုလ်များချင်သူများ ပုံတွေကို ရိုက်ကလစ် နှိပ်၍ အကြီးချဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ် ခိစ်…………………………………………
Posted on June 22, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ခရီးသွားခြင်း12 Comments on ရန်ကုန်-၁- (၁၁ ရက် ဇွန် ၂၀၁၀ခုနှစ် သောကြာ)
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေက ရန်ကုန်ကနေရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကို ဂျပန်စာ လိုက်ကျွေးပါတယ်။ အိမ်နားက အဝတ်တွေ ရောင်းတဲ့ platinum ပလာဇာမှာပါ (အရင်မောင်နဲ့ စားနေကြ ဖူဂျီ ဂျပန်ဆိုင်ပါပဲ မှာတာတွေကလဲ အရင်ကတွေနဲ့ ထူးမခြားနားဆိုတော့ Data redundancy ကိုပူပင်လို့ ပုံတွေ ထပ်မတင်တော့ပါ ဟိဟိ) စားပြီးတော့ ဘေးနားက ကွန်ပျူတာ စီးတီး ပန်တစ် ပလာဇာ ကို သွားပါတယ် မရောက်တာကြာလို့ ဘာတွေ အသစ်ပေါ်လဲသွားကြည့်တာပါ။ ရောက်တတ်ရာရာပေါ့ …..ပထမဆုံး ပုံလေးကို ကြည့်ပါ အနှိပ်စက်ကလေးပါ ယူအက်စ်ပီ နဲ့ ဆက်လိုက်ရင် ကွန်ပျူတာကနေတဆင့် သုံးလို့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ သုံးနေရင်းအညောင်းအညာပြေ နှိပ်လို့ရအောင်ပေါ့ ထွင်တတ်လိုက်ကြတာလို့ တွေးရင် နည်းပညာ တိုးတက်မှု ကို အားပေးကူညီ တဲ့အနေနဲ့ တခု ဝယ်လိုက်ပါတယ် (ခိစ်………………၁)
ဘေးက ပုံလေးကတော့ ကွန်ပျူတာ (၁) SONY VAIO ၁၅ လက်မ နဲ့ မောင်ပါ မောင်ဆိုတာက လက်ရှိရည်းစားဖြစ်ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာ ဆိုလိုတဲ့ကွန်ပျူတာ ဆိုတာကတော့ အရင် ရည်းစား လက်ဆောင်ဝယ်ပေးထားတာပါ ကပ်ကြွား မောင်နဲ့ တွဲပြထားတာက နှစ်ထပ်ကြွား ဒီလိုတော်တာနော် သူများသားသမီးတွေများ မကြုံကြုံအောင်ကို ကြွားတတ်တာ ဒေါ်သစ်ဆီက သေချာသင်ထားတာ (ခိစ်……………၂)
ပုံ-၃ ပန်တစ်ပလာဇာထဲလျောက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ မရည်ရွယ်ပဲ အသေးသုံး ကွန်ပျူတာလေးတလုံး ထသွားထလာ ခရီးသွားရင် သုံးရအောင် ဝယ်ဖြစ်သွားတယ် နက်ဘွတ်ခ်ဆိုလား ဘာလားပဲ samsung ကထုတ်တာ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်လေးပဲ လှကလှနဲ့ ဝယ်လိုက်မိတယ် စကရင်က ၁၀.၁ လက်မ မက်တယ်လစ်အပြာလေးပေါ့ နောက်ပုံ-၄ မှာကြည့်ပါ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ SONY VAIO ၁၃လက်မ နဲ့ တူတူယှဉ်ပြထားတယ် ကဲခုတော့ ဒေါ်ချမ်းတယောက် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ တလုံးရယ် အရင်က ရည်းစား အမ်းထားတဲ့ တလုံးရယ် အသစ်ဝယ်လိုက်တဲ့ တလုံးရယ် ဆိုတော့ ၁-၂-၃ စုစုပေါင်း သုံးလုံးဖြစ်သွားပြီပေ့ါ အဟစ်အဟစ်အဟစ် vaio က နှစ်လုံး samsung က တလုံး ကဲပါ စိတ်မရှိပါနဲ့ လုပ်စရာမရှိလို့ကြွားတယ်ပဲမှတ်ပါ (ခိစ်…………………၃)ဆက်ဘတ်………………..ဆက်ဘတ် …………………(ခိစ်………………၄)
ကဲကဲ ကြွားချင်တာလေးတွေကို မဆိုင်ဆိုင်အောင် ဆွဲကြွားပြီးသကာလ လိုရင်းကို ခုမှရောက်ပါမယ် မူလဘုတ ရည်ရွယ်ရာ ရေးဖို့အရာ တ…………တရုတ်အစားပုတ်ပါ…………………ဟုတ်…… တီ က တရုတ်စပ်ပါတယ် ခုလိုပဲ မကြာမကြာ ကိုယ်စားချင်တာလေးတွေကို ချက်စားလေ့ရှိပါတယ် ခုတော့ မနေ့ကမှ လောလောလတ်လတ်မောင်က မြန်မာပြည်ပြန်သွားတော့ တီက လောလောလတ်လတ် ကုတင်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းပြီး…အဲလေ……..(ခိစ်……………….၅) အပျိုလေးပြန်ဖြစ်နေပါတယ် အဲ့တော့ စနေတနင်္ဂနွေ လို အလုပ်အားရက်တွေမှာ အိပ်ချင်တဲ့ အချိန်မှအိပ်ပါတယ် ထချင်တဲ့အချိန်မှ ထပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ညနေ ၃နာရီခွဲမှ ထပြီးတော့ ရေခဲသေတ္တာ ကိုလှန်လောရှာဖွေတဲ့အခါ ကြက်သား တထုပ်တွေ့ပါတယ် နောက်ပြီး အိမ်ကြက် ထိုင်းအခေါ် မြန်မာအခေါ်မြန်မာကြက် (ဟုတ်တာပေါ့နော် မြန်မာလိုခေါ်တော့ မြန်မာကြက်တဲ့ တယ်လဲ ဟုတ်တဲ့နာမည်) ပေါင်းပြီးသား တဘူးတွေ့ပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ ကြက်သားနဲ့ မှိုနဲ့ချက်မယ် ကြက်စွပ်ပြုတ်လေးလုပ်မယ် လို့စိတ်ကူးပါတယ် ကြက်သားမှိုက နည်းနည်းအီမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟင်းရံအနေနဲ့ အချဉ်လေးတခုခုပါအောင် လုပ်မယ် စိတ်ကူးပြန်တော့ ကြက်သားမှိုနဲ့ လိုက်လဲလိုက်တဲ့ လွယ်လဲလွယ် အိမ်မှာ ရှိတာလေးတွေနဲ့ ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတဲ့ ကြက်သွန်နီ သုပ်လေး တပွဲအမြန်သုပ်လိုက်ပါတယ် အထင်မသေးနဲ့နော် ဒီလိုစားကောင်းတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး
ကြက်သွန်ကို ပါးပါးလှီးပါမယ် အပါးဆုံးတတ်နိုင်သလောက်လှီးပေးပါ ပါးလေစားကောင်းလေပါပဲ ပြီးရင်ရေဆေးပြီး ညစ်ပါမယ် နောက် ငရုတ်သီး စိမ်း လေးတွေကို လဲ ညက်ညက်ကလေး လှီးထားပါမယ် ပြီးတော့ ဆား အချိုမှုန့် သင့်ရုံ ထည့် သံပရာသီးလေး ညှစ်လိုက်ပါ နောက်လက်နဲ့ အားရပါးရ နယ်လိုက်ရင် စားကောင်းပြီး အအီပြေလှတဲ့ ကြက်သွန်နီသုပ်တပွဲရပြီပေါ့………အောက်ပါ ပုံကိုရှူပါ။
အောက်ကပုံလေးတွေကတော့ ကြက်သား စွပ်ပြုတ်လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရာလေးတွေပါ ပထမ
ဆုံးပုံက အာလူးရယ် ကြက်သွန်နီဥလေးတွေရယ်ပါ စွပ်ပြုတ်ချိုအောင် ကြက်သွန်နီ ဥလေးတွေ ထည့်ပေးတာပါ ဘေးက မွှေအောင်ထည့်တဲ့ ဂျင်းပါ အခွံခွာ ဓါးပြားရိုက်ပြီး ထည့်ပါမယ် နောက်တပုံကတော့ ကြက်သွန်ဖြုဥတွေပါ လေကြေအောင်ပေါ့…………..(ခိစ်………………….၆)
နောက် ဘေးက ဘူးလေးကတော့ ခုနကပြောတဲ့ ပေါင်းပြီးသား မြန်မာကြက်ပါ တီက အဲ့တာကို ဘူးလိုက်ဝယ်ဝယ်ထားပြီး ခါတိုင်းဆိုရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ တူတူထည့်ပြုတ်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ်လဲ ကြာဇံပေါ့ ချိုပြီးစားကောင်းပါတယ် ခုတော့လဲ စွပ်ပြုတ်ပေါ့လေ………..ဘေးက အိုးကတော့ ရေတွေ လိုသလောက်ထည့် ခုနကက ပစ္စည်းတွေအကုန်ပစ်ထည့် ပြီးတော့ ဆားအချိုမှုန့်သင့်ယုံထည့်ပြီးပြုတ်လိုက်ရင် အရသာ ရှိပြီး အဟာရလဲကောင်းမွန်တဲ့ ကြက်သားစွပ်ပြုတ်တပွဲရပြန်ပြီပေါ့……….စကားမစပ် ခုဘလောခ်ရေးနေရင်းနဲ့တောင် စွပ်ပြုတ်တခွက်သောက်နေပါသေးတယ် ဟမ်း………………………
ဒါကမှာ မိန်းဒစ်ရ်ှပါ လာပါပြီ ကြက်သားမှိုပါ
မှိုကတော့ မှိုမွှေးလို့ခေါ်ကြတဲ့ မှိုခြောက်တမျိုးကိုသုံးပါတယ် ဒီမှိုကမှ အရသာရှိပါတယ် အရင်ဆုံး ရေနွေးဆူဆူနဲ့ မှိုကို အရင်စိမ်ထားပါမယ် မှိုက ပွတက်လာမှ အညှာလေးကို လှီးထုတ်ပြီးတော့ လေးစိပ်စိပ်ပါမယ်…ဘေးက ပန်းကန်ထဲမှာ ကြည့်ပါ နောက်ဘေးက တပန်းကန်ကတော့ ကြက်သားပါ ဒီကြက်သားက ခုနက ကြက်သားနဲ့မတူပါဘူး သိပ်စားမကောင်းဘူး စီပီကြက်ပါ တီမုန်းပါတယ် မရှိတော့လဲ အဲ့တာကိုပဲ စားရပါတယ် မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းပါတယ်
နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဟင်းချက်ရင်မရှိမဖြစ် ကြက်သွန်ဖြုနီ ဆီသတ်ရပါတယ် ဒီဟင်းမှာ တခု ထူးခြားတာက ဆီအရင်ဆုံးထည့်ပြီး ဆီပူလာအောင် တည်ပါတယ် ပြီးရင် ကြက်သွန်ဖြူနီ မထည့်ခင် အရင် သကြား နည်းနည်းထည့်ရပါမယ် (ဟုတ်ပါတယ် sugar ပါ) ဟင်းက အချိုပါ အချိုတိုင်း သကြားထည့်ချက်စရာမလိုပေမယ့် ဒီဟင်းကျတော့ ဆီပျံတဲ့ အခါကျရင် အရောင်လေးလှနေအောင်ပါ အရသာကလဲချိုသလို တိုတိုလေးဖြစ်နေမယ်လေနော် အဲ့လိုပါ….
သကြားလေးတွေ နည်းနည်းပျော်သွားပြီဆိုမှ ထုံးစံအတိုင်း ကြက်သွန်ဖြူနီ ထည့်ပါမယ် နည်းနည်းလေး အရောင်လှလာအောင်ကြော်ပေးပါမယ်….ပြီးတော့ မှ ကြက်သားထည့်ပါမယ် ကြက်သား ကို နည်းနည်းနီလာတဲ့အထိ ကြော်ပေးရပါမယ်…….ကြက်သားကလဲရေထွက်အုံးမှာ ဆိုတော့ ရေထည့်စရာမလိုသေးပါဘူး ဆီကိုလဲ အများကြီးမထည့်ပါနဲ့ (ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူး)
နောက်တဆင့်ကတော့ ကြက်သားတွေ ပုံပါအတိုင်းအရောင်လှသွားပြီဆိုရင် ခုနက စိမ်ပြီး လှီးချွတ်ထားတဲ့ မှို ကို ထည့်ပါမယ် အောက်က အစွန်ပုံမှာ ကြည့်ပါ မှိုထည့်ပြီး ခဏ မွှေပြီးရင်တော့ ရေနည်းနည်းထည့်လို့ရပါပြီ
အလယ်ပုံပါ ပြီးရင်တော့ မတူးအောင်အိုးလေးကိုမွှေပေးနေပါ နောက်ဆုံးပုံအတိုင်း ဆီပျံ ပြီဆိုရင်တော့ ဟင်းအိုးကိုချလို့ရပါပြီ
ဒါဆိုရင်တော့ နာမည်ကျော်ကြား လူကြိုက်များလှတဲ့ စားမိစွဲငြိ အရသာသိ ထပ်စားချင်းသလား ဘန်ကောက်ကို အမြန်လာထား ဆိုတဲ့ မူလလက်ဟောင်း အန်တီချမ်း ရဲ့ ကြက်သားမှို ဟင်းတခွက်ကို ရပါပြီ ပေါ့နော်………………ပေါ့နော်…….ပေါ့နော်……..
အဲ့နောက်မှာတော့ ထမင်းနဲ့ ဒီလိုနယ်ဖတ်ပြီးသကာလ ခုနက အအီပြေ ကြက်သွန်နီ သုပ်လေးနဲ့ မြန်မာ ကြက်စွပ်ပြုတ်လေးနဲ့ ခေါင်းမဖော်တမ်းလွေးလိုက်တာ အရီး တို့ အဘတို့ နာမည်တွေတောင် မေ့တေ့တေ့ ဆိုပဲ………………………
Posted on June 6, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ဟင်းရည်, အချိုချက်, အသုပ်များ18 Comments on တ…တရုတ်အစားပုတ်…
တချို့လူတွေက ကိုယ့်ကိုမေးလာကြတယ်။ ၂၁ ရာစုရဲ့ မိန်းမပျို မိန်းမလွတ်တွေ ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သင့်သလဲတဲ့?
ကိုယ်က မိန်းမပျို မိန်းမလွတ်တွေရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ ကိုယ်ပြောတာက မိန်းမပျို မိန်းမလွတ်တွေကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့
အဲ့ဒီ မေးခွန်းကို ကိုယ်မဖြေနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့သာ မေးခွန်းက ၂၁ ရာစု ရဲ့ ကိုယ်က ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့မေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဖြေနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်ကြီး သုံးခု ကို ကိုယ်က * “မ” သုံးလုံးနဲ့ ကိုယ်စားပြုဖြေပါမယ်။
• “မ” စောင့်ရှောက်ဘူး
• စိတ် “မ” ဝင်စားဘူး နဲ့
• “မ” သနားဘူး ဆိုတာတွေပါပဲ။ အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပါမယ်။
ပထမဆုံး “မ” ဖြစ်တဲ့ မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုတာ က ဒီလိုပါ ယောက်ျားတွေကို နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မစောင့်ရှောက် ဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ လူတယောက်ကို စောင့်ရှောက်ရတာ သိပ်ပင်ပန်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးကစပြီးတော့ တောင်လျောက် အကုန် လိုက်လိုက်ပူ နေရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အလုပ်၊ မိသားစု၊ နောက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်။ ကိုယ်သာလျင် အကောင်းဆုံး အတော်ဆုံး တုနှိုင်းရာမဲ့ လို့ သူသိလာအောင် သူ့ကို အစစအရာရာ လိုလေ သေးမရှိ သေသေချာချာ စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် စောင့်ရှောက်ထားရပါတယ်။ ကိုယ်တော့ နောက်ထပ် အဲ့လောက် မမောချင်၊ စိတ်မပင်ပန်းချင်တော့ဘူး။ အဲ့တာကြောင့် နောက်ကို ဘယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုမှ ကိုယ် “ထပ်” မစောင့်ရှောက်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ကပဲ အစောင့် ရှောက်ခံပါမယ်။
ဒုတိယ “မ” ဖြစ်တဲ့ စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာက ဒီလိုပါ။ ယောက်ျားတွေကို ဘယ်တော့မှ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်တစား နဲ့ သတိမပြုပေးတော့ ဂရုမစိုက်ပေးတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဘယ်လို နေ့ရက်မျိုးမှာ မဆို (ဥပမာ-ချစ်သူများနေ့၊ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ စသဖြင့်ပေါ့) သူ့အတွက် လက်ဆောင်ကို သေသေချာချာ ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ပြီးဝယ်ပေးတာမျိုး၊ အမှတ်တရ ရှိပေးတာမျိုး၊ သူပျော်အောင် တခုခု လုပ်ပေးတာမျိုး တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အကြင်နာ ဂရုစိုက်မှု တွေကို ရအောင် မလုပ်တော့ဘူး။ လက်ဆောင် တခုပေးတယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်သိပ်ခြောက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီပေးမယ့် လက်ဆောင် က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ကြိုက်ရမယ်၊ ပြီးတော့ သူကလဲ သဘော ကျရအုံးမယ်၊ ကဲ ဘယ်လောက်များ ခက်ခဲ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလိုက်သလဲလို့နော်။ စိတ်ဝင် စားမှု ဆိုတာ အချိန် အင်မတန်ပေးရပါတယ်။ အချိန်ရှိနေပြီဆိုရင်တောင် အဲ့ဒီအချိန်တွေကို ကိုယ့်ဘဝ တိုးတက် ဖို့အတွက်ပဲ သုံးလိုက်တော့မယ်။ ဟုတ်တယ်မှလား?
နောက်ဆုံး “မ” ကတော့ မသနားဘူးပါပဲ။ ကိုယ်မချစ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်တော့မှ စိတ်မပျော့ပါနဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်က ခံစားချက် လုံးဝမရှိ ဘူးဆိုရင် ဘာလို့ နှစ်ယောက်စလုံး ရဲ့ အချိန်တွေကိုဖြုန်းနေမလဲနော်။ နောက်ပြီး သူ့ကိုလဲ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်တာတွေ ဘာညာတွေ လုပ်မနေပါနဲ့။ မတရားပါဘူး။ တကယ်လဲ မချစ်နိုင် ဘဲနဲ့ အဲ့လို သူ့ကို မျှော်လင့်ချက်တွေပေးသလို လုပ်ထားမယ်ဆိ်ုရင် သိပ် သိပ် ရက်စက် လွန်းရာကျပါတယ်။ နောက်တခုက ခုခေတ်မှာ ၃ နှစ် ၃ မိုး စောင့်ခိုင်းတာတွေ မေ့မေ့ဆူလိမ့် မယ် ဆိုတာတွေက ခေတ်မမှီတော့ပါဘူး။ အစကတည်း က ပြောထားတယ်လေ ၂၁ ရာစု ရဲ့ ကိုယ်ပါ လို့နော်။ ဒုံးပျံခေတ်မှာ ကိုယ်တွေကလဲ လိုအပ် ရင် အလင်းထက်မြန်ရပါမယ်။
တချို့ကျတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လိုငြင်းငြင်း သူက ကုတ်နဲ့ခွာတောင် မကျ ဘူးဆိုတာမျိုးပါ။ အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ ပိုတောင် ဆိုးပါသေးတယ် လုံးဝ ကို သနားမနေပါနဲ့။
သံပုံးသာ တီးလိုက်ပါ။ ပစ်ပစ်ခါခါပဲဆိုဆို…“ရှင့်အချိန်တွေကို ကျမ မဖြုန်းချင်သလို ကျမ ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကိုလဲ မဖြုန်းချင်ပါနဲ့” လို့ သာပြောထည့်ပလိုက်ကြအေ။
ကဲလာ တို့တွေ အတူတူ ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင် မှတ်မိတယ်နော် ရွှေခြူး အဲလေ…
• မသနား နော်…
* (“မ” သုံးလုံး ဆိုလို့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အမ ကိုတောင် သတိရမိပါသေးတယ်။ သူ့နာမည်က မီမီမောင်ပါ “မ” သုံးလုံး ပါပဲ။ မိမိမုန်းမဟုတ်ဘူး၊ မိုမိုမြင့်မဟုတ်ဘူး၊ မင်းမင်းမြတ် မဟုတ်ဘူး မီမီမောင်လို့ အမြဲ ပြောလေ့ရှိပါတယ် ဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူး ဒီစာကြောင်းရေး နေရင်းနဲ့ ဂျူးရဲ့ “ကံကြမ္မာကိုမယုံကြည်ကြသူများ” (ကိုယ်လဲပါတယ် ^o^) ထဲက “not သင်းသင်းဆရာ my name is သင်သင်ခိုင် ဝစ္စနှစ်လုံးပေါက်မပါဘူး” လို့ ထပြောတဲ့ ကျောင်းသူ ကိုသတိရမိပါသေးတယ်။)
Posted on June 3, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါ6း Comments on မိန်းမ နဲ့ “မ” သုံးလုံး
ပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ အလုပ်မရှိဘူး၊ ရည်းစားမရှိဘူး၊ ကိစ္စလဲ မရှိဘူး…
လောလောလတ်လတ်ကမှ ဘွဲ့ရထားတဲ့ ဂျေနဲ့ကေ နှစ်ယောက် အလုပ်ရှာမရဖြစ်နေပါတယ်။ ကြားထဲမှာ ရည်းစားတွေကလဲ ပစ်သွားသေးတယ်။ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံဆိုတာကလဲ ချူး ပြား ဘယ်လောက်မှ မကျန် ချင်တော့ဘူး။ အဲ့တော့ ပိုက်ဆံကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားပြီး လျောက်လျောက်မသုံးရဲဘူး။ ဒါပေမယ့် ကေ က ဂျေထက် စာရင် ပိုပျော်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မျှော်လင့်ချက်က မနက်ဖြန်မှာ ရှိတယ် လို့ ကေ ယုံတယ်လေ။
ပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ အလုပ်မရှိဘူး၊ ရည်းစား မရှိဘူး၊ တော်တော်တော့ အဖြစ်က ဆိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာတွေအကုန်လုံးက ကမ္ဘာပျက်တဲ့နေ့မဟုတ်သေးဘူး။ အဲ့တာတွေ အားလုံး အတွက် မျှော်လင့်ချက် ဆိုတာ မနက်ဖြန်မှာ ရှိသေးတယ်။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိ တော့ဘူး ဆိုရင်မှ ကမ္ဘာပျက်တာ။
သူငယ်ချင်းတယောက် ရှိဘူးတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို ကိုယ်မြန်မာပြည်ပြန်တိုင်းတွေ့ဖြစ်ကြ တယ်။ ဒီတခေါက်တွေ့ကြတော့ သူက ကိုယ့်ကို သူ့အမေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က အက်စီ ဒန့် တခုကြောင့် ဆုံးသွားပြီတဲ့။ ဒီလှတပတ ကောင်မလေးက အရင်ကဆိုရင် ရည်းစားသနာ ကိစ္စ တွေနဲ့ အင်မတန်မှ ကို ဒရာမာတွေများနေလေ့ရှိတာပါ။ ခုတော့ သူက သူ့မှာ ရှိသမျှ သူဖြုန်းခဲ့သမျှ အချိန်တွေ ဂရုစိုက်မှုတွေ နာကျင်တဲ့ခံစားချက်တွေ စိတ်ပူပန်မှုတွေ အချစ်တွေ ပေးဆပ်မှုတွေ အကြင်နာတွေ အကုန်လုံးနဲ့ သူ့ မေမေ ရဲ့ ဘဝ ကိုပြန်လဲချင်ပေမယ့် မရတော့ ဘူး။ သူ့မေမေ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး။ ဘာနဲ့ လဲလဲ မရတော့ဘူး။ ခုတော့ သူ့မှာ ဖေဖေရယ် သူရယ် မောင်လေးရယ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အခုတော့ အိမ့်တာဝန်တွေအကုန် သူ့တာဝန်တွေချည်းဖြစ်လာခဲ့ပြီလေ။ သူက ကိုယ့်ကို ဘာပြောသလဲဆိုတော့ …
“အဝတ်လျှော် ရတာ ချက်ရ ပြုတ်ရတာ ဒီလောက်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ အခုမှသိတော့တယ်” တဲ့။
အသက် ရှင်သန်မှုနဲ့ ယှဉ် ရင်တော့ ပိုက်ဆံ၊ အလုပ်၊ ရည်းစား တွေဆိုတာတွေက ဘာများ ပြောပလောက်တာမို့လို့လဲနော်။ အရင်တုံးကတော့ အသဲကွဲတာ ဆို ခံစားလိုက်တာ ဘဝ တခုလုံး အဆုံးသတ်လိုက်ရတော့မလို အသည်းအူတွေ ကြေပြုန်း၊ ရင်ကွဲနာတွေကျ၊ ကျောက်တုံးလေးလေး ကြီး တခု ရင်မှာ ဆွဲထားရသလိုပဲ။ ဒရာမာတွေပေါ့ ဒရာမာတွေ။ ဒါပေမယ့် နောင်များတော့ နှစ်တွေလဲကြာလာရော အသက်တွေလဲကြီးလာရော အတွေ့အကြုံ တွေလဲများလာရော ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ အရင်က ခံစားနာကျင် ခဲ့ဖူးတာတွေကို ပြန်လည် လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အရင်က ကျောက်တုံးကြီးက ခုတော့လဲ ရွေးနီစေ့လောက်တောင် မဟုတ်ပါလားဆိုတာ သဘောပေါက်လာမှာပါ။
အဲ့လိုတွေးမိတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ပြန်ပြုံးမိပါလိမ့်မယ် ။ တခါတခါ တချို့ကိစ္စ တွေကို သိပ်ပုံကြီးချဲ့မြင့်မိခဲ့ပါလားလို့ပေါ့။
တကယ်လို့သာ အသက်ရှင်နေသ၍ အိပ်မက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန်ဆိုတာလဲ ရှိနေအုံးမှာပါ။ အဲ့တာဆိုရင် ပိုက်ဆံဆိုတာ လဲ ရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ ရည်းစားဆိုတာလဲ ရလာပါလိမ့်မယ်၊ အလုပ်ဆိုတာလဲ မရှာပါဘူးဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ ကိစ္စ ဆိုတာလဲမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။
Posted on June 1, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး8 Comments on ပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ အလုပ်မရှိဘူး၊ ရည်းစားမရှိဘူး၊ ကိစ္စလဲ မရှိဘူး…